शिक्षाको ज्योति छर्दै दुर्गा access_timeमंसिर ५, २०७६
अशिक्षित महिलासम्म शिक्षाको पहुँच पु-याउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेकी छिन्, दुर्गा थापा । घर–व्यवहार सम्हालेर बसेका महिला पनि शिक्षित बनुन्, केही नभए पनि सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने होउन् भन्ने अभिप्रायले उनी सो अभियानमा लागेकी हुन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोसी गा...
१८ वर्ष लगाएर तयार गरिएको शब्दकोश access_timeभदौ १८, २०७६
वेब्स्टर अमेरिकन डिक्सनरी अमेरिकन अंग्रेजी भाषको प्रसिद्ध शब्दकोष हो । यो शब्दकोष नोहा वेब्स्टर (१७५८–१८४३) नाम गरेका अमेरिकनले तयार पारेका हुन् । उनी शब्दकोषकार तथा भाषासुधारक थिए । तर के तपाइलाई थाहा छ– यो शब्दकोष तयार गर्न उनलाई कति समय लागेक...
एसईई पछिको गन्तव्य कता ? access_timeचैत १९, २०७५
भर्खरै सेकेन्डरी एजुकेसन इक्जामिनेसन (एसईई) परिक्षा सम्पन्न भएको छ । एसईईपछि अढाई महिना बिदा हुन्छ । धेरै विद्यार्थीको मनमा लाग्ने स्वाभाविक प्रश्न के हो भने परीक्षा पछाडिको खाली समयमा के गर्ने ? अहिले नेपालमा एसईई पछिको खाली समयको सदुपयोग होस् भनेर विभिन्न शैक्षिक स...
३ जनाको लागि २ बोतल भोड्का ठीक कि ३ बोतल भोड्का चाहिँ ५ जनाको लागि ठीक ? access_timeचैत ४, २०७५
सबैलाई गणित आउँछ, फरक यति हो कसरी बुझ्ने बुझाउने ! यस्तै भन्छन् सोभियतसंघका प्रसिद्ध गणितज्ञ इजरेल गेलफान्ड । उनको यो भनाइ प्रसिद्ध छः मानिसहरु ठान्छन्, आफूलाई गणित आउँदैन । तर वास्तविकता चाहिँ यो हो कि सबैलाई गणित आउँछ । फरक यति हो, तपाईं त्यसलाई कसरी व्याख्या ...
शिक्षकको क्रूरताविरुद्ध माओको विद्रोह ! access_timeपुस ११, २०७५
प्रसिद्ध चिनियाँ नेता माओ त्से–तुङलाई सात वर्ष उमेरमा मात्रै स्कुलमा भर्ना गरिएको थियो । उनले आफ्नो गाउँ– शाओशानकै प्राइमरी स्कुलमा औपचारिक अध्ययन थालेका थिए । त्यस स्कुलमा एक जना क्रूर शिक्षक थिए । उनले आफ्नै घरमा स्कुल खोलेका थिए । त्यसमा केही फी लिएर उनी ...
विमानभित्र थिए पाइलटका स्कूलका शिक्षक, भावुक भेट देखेर यात्रीसमेत रोए (भिडियो) access_timeमंसिर १७, २०७५
एक शिक्षक कुनै व्यक्तिको जीवनमा कति महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने उदाहरण उडिरहेको विमानभित्र देख्न सकिन्छ । एक पाइलटले आफ्ना स्कूलका शिक्षकका लागि निकै भावुक तरिकाले सम्मान प्रकट गरेका छन् । आफ्नो छात्रको यस्तो सम्मान देखेर ती शिक्षक निकै भावुक भए कि उनले आफ्नो आँसु रोक्न सकेनन् । ...